Boqorka Dalka Jordan oo ugu baaqay Madaxweyne Asad inuu iscasilo – SBC
Boqorka Dalka Jordan oo ugu baaqay Madaxweyne Asad inuu iscasilo
Posted by Webmaster on November 15, 2011 Comments
Boqor Abdallaha Wadanka Jordan ayaa noqday hogaamiyihii carbeed ee ugu horeeyay kaasi oo ugu baaqay Hogaamiyaha wadanka Suuriya Bashaar Alasad inuu iscasilo ka dib markii ay dalkiisa ka ka socdaan weli Dagaalo iyo Mudaharaadyo Hogaankiisa looga soo horjeedo
King Abdullah ayaa waxaa uu warbaahinta u sheegay in hadii uu isagu joogi lahaa booska Basher Asad hogaamiyaha wadanka Suuriya uu dareemi lahaa in qofkasta oo kaga dambeeya HOgaanka wadanka uu awood u leeyaha inuu wax ka badalo xaalada haatan sida ayt tahay.
Boqorka Jordan ayaa ugu baaqay Madaxweyne Asad inuu wadahadalo la yeesho hogaanka Mucaaradka ee wadankaas si ay isbadel ugu sameyso guud ahaan wadanka oo dhan iyo xaaladaha lagu jiro iminka.
Hadalka Boqorka uu siiyay Saxaafada ayaa waxaa uu sidoo kale ku sheegay hadii uu bashaar daneynayo dalkiisa in uu iscasilo ama uu sameeyo dhismo dowladeed oo cusub kaasi oo weji siyaasadeed oo cusub gelin kara dadka reer siiriya.
Madaxda wadama carbeed ayaa mudooyinkan si aad ah u waday canbaareynta loo jeedinayo Hogaamiyaha wadanka Suuriya oo dadka wadankiisa ay ka soo horjeesteen Xukun dheeree ee ay isaga iyo aabihis majaraha u hayeen wadanka Suuriya.
Wadamada Sucuudiga iyo Qatar ayaa safiiradoodi ka joogay Magaalada Dimishiq kala soo baxay halkaasi ka dib markii banaanbaxyada Kacdoonka ah ka ka curteen dalkas suuriya kuwaasi oo markii danbe isku badelay kuwo dhig ku daato.
Dhawaan ayay ahayd markii Jaamacada Carabta wasiiradooda ay u codeeyeen in siiriya laga saaro kuriga ay ku leedahay Ururkaasi.
Madax kala duwan oo ka tirsan Wadamada reer galbeedka ayaa ugu baaqay Bashaar Asad in uu is casilo bacdmaada uu wayay Kalsoonidii shacabka wadankiisa uu ku maamulilahaa kuwaasi oo muddo dhow bilood ah ku dibadbaxaya magaalooyinka wadankaasi.